ny totalin’ny tetibola ary ny fomba nitsinjarana ireo tsena ho an’ny nanatanteraka ny asa toy ny fanamboaran-dalana, ny fananganana maimaika ny village de la francophonie, ny fanatsarana natao teny amin’ny trano fivorian’ny CCI Ivato, ny fikarakarana ilay fiaraha-misakafo teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha. Maro ny zavatra mampiahiahy ary efa nampaneno lakolosy nanaitra ireo tompon’andraikitra ny fikambanan’ny firaisamonim-pirenena na ny OSC tamin’ny atrikasa sy fifanakalozan-kevitra nataony ny 22 sy 23 novambra lasa teo teto Antananarivo. 107 ireo tsenam-barotra nozaraina, azo avy amin’ny famoahana tolobidy sy fiantsoana ireo izay liana ny 54 tamin’ireo, tamin’ny alalan’ny fifampiresahana kosa no nanomezana ny 53 ambiny.Ankoatra izay, araka ny nambaran’ny OSC ihany, dia matetika no latsaky ny 3 ny mpifaninana amin’ny tolobidy, kanefa dia natao ihany ilay izy. Tena fandikan-dalàna tsotra izao eo amin’ny resaka tsenam-panjakana anefa izany. Misy aza ny hoe olona iray monja no nandefa antontan-taratasy ary tonga dia nomena azy ilay tsena, araka ny tatitry ny firaisamonim-pirenena hatrany. Tahaka izany ohatra ny fiaraha-misakafo nanasana ireo filoham-pirenena teny Iavoloha izay nolazaina fa 297 tapitrisa Ariary no sandany kanefa 189 tapitrisa ariary tany am-boalohany no tetibola noeritreretina hikarakarana azy.
Efa misy ny anarana manomboka mivoaka ny amin’ireo tompon’andraikitra tao ambadik’izao kolikoly amin’ny fikarakarana ny Frankofonia izao, ka miandry izay mety ho fihetsiky ny Bianco ny rehetra. Hanadihady sa hody fanina fotsiny ? Tsy afa-bela amin’izao raharaha izao ary tokony hanazava ny komity mpikarakara ny Frankofonia sy ny avy ao amin’ny fiadidiana ny repoblika. Hatreto aloha, araka ny tsiliantofina re, dia manodidina ny 600 tapitrisa Ariary eo ho eo ny vola voahodina. Re ihany koa fa misy ramatoa mpandraharaha nahazo tsenam-barotra kanefa tsy nandefa antontan-taratasy akory fa mahafantatra olona sy mahay mandambolambo fotsiny dia mety ny afera rehetra. Ny ahiahiana dia kolikoly avo lenta tahaka izao no nampiongana ny filoha Breziliana Dilma Roussef , ary mampihozongozona ny sezan’ny filoha Afrikanina tatsimo Jacob Zuma ka tokony ho hentitra ary sahy mampanao fanadihadiana lalina ny Inspection Générale de l’Etat (IGE) ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mba hanaporofoany fa mangarahara ny fitantanany ny firenena ary tsy misorona manasazy ireo mpanodinkodina volam-bahoaka ny fanjakana mahefa.